Lahatenin’ny ambasadaoro Guo Xiaomei: “Maherin’ny 98 tapitrisa ireo Sinoa afaka amin’ny fahantrana” - ewa.mg
Lahatenin’ny ambasadaoro Guo Xiaomei: “Maherin’ny 98 tapitrisa ireo Sinoa afaka amin’ny fahantrana”
News - Lahatenin’ny ambasadaoro Guo Xiaomei: “Maherin’ny 98 tapitrisa ireo Sinoa afaka amin’ny fahantrana”
Lesona sy fakan-tahaka. Nivoitra
tamin’ny lahatenin’ny ambasadaoro sinoa, i Guo Xiaomei, tetsy
Nanisana, omaly tamin’ny andiany voalohany “Salon des médias de
l’ambassade de Chine”, ny lalana nodiavin-dry zareo. “Tratra ny
tanjona tamin’ny taona lasa ny hampihenana ny fahantrana. Tafavoaka
sy afaka tamin’ny fahantrana ny mponina ambanivohitra hatrany
amin’ny 98 990 000 », hoy izy tamin’ny alalan’ny
« viseo-conference ». Lasa mialoha 10 taona izany raha
hatrany amin’ny 70% ny mponina maneran-tany no ho afaka amin’ny
fahantrana, araka ny fandaharanasa ho an’ny fampandrosoana
maharitra nambaran’ny Firenena mpikambana hatramin’ny taona 2030.
Nanteriny fa anisan’ny nahatongavana amin’izany ny hetsik’ireo
mpikambana eo anivon’ny antoko kaominista sinoa (PCC), nijery
manokana ireo sahirana sy ny tanora na koa ireo zokiolona tany
ambanivohitra rehetra any. « Ny tombontsoa iombonana aloha
no voalohany sy zava-dehibe », hoy ny
ambasadaoro.Voatsiahy tamin’izany koa ny dingana nolalovan’ny PCC,
nanomboka hatramin’ny niforonany ny taona 1921 raha mbola 50 ihany
ireo mpikambana tamin’izany. Tonga tany amin’ny fahazoana ny
Fahaleovantena izany ny 1 oktobra 1949 ary nampijoro ny Repoblika
entim-bahoakan’i Sina. Voaresaka koa ny fiaraha-miasan’ny firenena
roatonta tao anatin’ny 49 taona sy ireo zava-bita na fotodrafitrasa
naorian’izy ireo eto…
L’article Lahatenin’ny ambasadaoro Guo Xiaomei: “Maherin’ny 98 tapitrisa ireo Sinoa afaka amin’ny fahantrana” a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 13/03/2021
Lehilahy iray no tra-tehaky ny fokonolona teo am-pandrobana trano teny amin’iny faritra Lazaina Avaradrano, kaominina Anosy Avaratra, omaly vao maraim-be. Mamo tsy naharay vatana intsony ingahirainy ka tsy afa-nitsoaka intsony na dia efa voangona sy vonona ary nobataina fotsiny aza ireo entana nokasaina hangalarina. Voalaza fa tsy naharitra ireo labiera tao anaty vata fampangatsiahan’ilay trano norobainy ka dia nisotro… Mazava ho azy, efa manomboka leo amin’ity resaka tsy fandriampahalemana ity ny olona ka rafitra nidaroka sy namono ary rehefa afa-po vao niantso ireo mpitandro filaminana. Tonga teny an-toerana ireo pôlisy avy ao amin’ny kaomisaria foibe Avaradrano, nitondra ity lehilahy ity tany amin’ny birao mba hanaovana fanadihadiana. « Naratra be ihany ity lehilahy ity ary efa nentina nojeren’ny mpitsabo, izay vao nentina notazomina natao andrimaso » hoy ny fanazavana. Marihana fa hoe niasa nandoko tao amin’io trano norobainy io ihany ity lehilahy ity, izay raha zohiana tamin’ny famotorana natao azy dia efa jiolahy rain-dahiny ihany. Heverina fa tetik’ady nentina namantarana ny hidin-trano hafa indray sy ireo entana rehetra sarobidy tao amin’ilay tokatrano izany. Voalaza mantsy fa efa niharan’ny fandrobana efa maromaro ihany talohan’izao io tokatrano io ka mazava ho azy fa tsy maintsy efa novain’ireo tompon-trano ny hidim-bavaravarana. Fantatra tamin’ny fanadiadiana natao ity lehilahy ity fa izy ihany no tompon’antoka tamin’ireo asa ratsy ireo ary io saika mbola hiverenany io kanjo izao tratra izao ingahirainy, soa ihany ! Na izany aza anefa dia fantatra fa miteti-bidy eo amin’ny efatra hetsy sy roa tapitrisa ariary teo ho eo no totalin’ny entana efa voarobany tamin’izany. Anio no fantatra fa mety hatolotra eny anivon’ny Fampanoavana ity jiolahy ity, raha tsy misy ny fiovàna. m.L L’article Lazaina Avaradrano : Jiolahy tra-tehaka : mamo teo am-pisotroana labiera tao amin’ny trano notafiany est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Lazaina Avaradrano : Jiolahy tra-tehaka : mamo teo am-pisotroana labiera tao amin’ny trano notafiany a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Trafikana zava-mahadomelina: rongony 547 kilao indray no sarona tany Ihosy
Tra-tehaky ny zandary ao Androketamalama, fonkotany Andrera, kaominina Soamatasy, ny alin’ny alahady teo ny gonin-drongony marobe. Miisa 55 gony ary milanja 547 kilao izany, hoy ny fanazavan’ny zandarimaria.Tratra tamin’ny alalan’ny angom-baovao sy ny fiaraha-miasa tamin’ny mponina tao an-toerana ireo rongony marobe. Vokany, noraisim-potsiny tao an-tranony ny tompon’izany niaraka tamina rongony telo gony hafa. “Fantatra mazava fa ny fidorohana ny zava-mahadomelina dia mampirongatra ny tsy fandriam-pahelemana ka tsy maintsy andraisana andraikitra”, hoy ny zandarimaria.Ankoatra izay, fototra rongony 470.000 isa ihany koa no sarona tao Analabe Ambanja, nandritra ny hetsika manokana nataon’ny zandariamarian’i Diana tao anatin’ny faritra Analabe ao anatin’ny distrikan’Ambanja sy Ambilobe, ny 4 ka hatramin’ny 20 jona lasa teo. Vokany, tratra tamin’izany ny tanin-drongony 61 ha, izay nahitana ireo fototrana zava-mahadomelina marobe sahabo ho 94 taonina, rongony efa maina 46.370kg ary voan-drongony 45kg. Voasambotra tamin’ity tranga ity ny olona 27 isa mpamboly ireo zava-mahadomelina. Ankoatra izany, mbola nahatrarana basy vita gasy ihany koa tamin’ireo andian’olona ireo. Voalaza tamin’izany fa jiolahy mpamongady ny roa tamin’ireo vosambotry ny zandary. Taorian’izay, nopotehina teny ifotony ireo rongony lena sy maina raha nodorana kosa ireo 6 taonina. Hetsika natao teo anatrehan’ireo manam-pahefana sy ny mpanao gazety.Henintsoa HaniL’article Trafikana zava-mahadomelina: rongony 547 kilao indray no sarona tany Ihosy a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – « Orange Pro League »: hiady ny ho lohany ny AS Adema sy ny Ajesaia
Hitohy ny faran’ny herinandro izao ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara (Orange Pro League-OPL), taranja baolina kitra, tsy azo atrehin’ny mpijery. Anisan’ny lalao andrasan’ny maro ny fifanandrinana eo amin’ny AS Adema sy ny Ajesaia. Lalaon’ny efa samy tafita hiatrika ny antsoina hoe “Playoffs”, ny roa tonta nefa na izany aza, tsy maintsy hanampy ny azony, isa 22 ny ekipan’ny seranam-piaramanidina raha 23 kosa ny an’ny avy etsy Antaninkatsaka. Ela­nelana isa iray no manasaraka ny an-daniny sy an-kilany. Ho fantatra eny By Pass ny ho laharana voalohany amin’izy ireo ho an’ny kaonferasa Avaratra.Hiady tsy hidinana diviziona faharoaAnkoatra izany, tsy maintsy miady mafy koa ny FC Zanakala, manana isa 13 sy ny CS-DFC, isa 10, any amin’ny laharana faharoa avy any amin’ny farany ho an’ny kaonferansa Atsimo. Tsy maintsy hiady mafy ny ekipa roa tonta raha tsy te ho raraka amin’ity fifaninanana ity ka hidinana any amin’ny diviziona faharoa. Hatao eny By Pass hatrany koa ny fifanandrinan’izy ireo. Etsy an-daniny, handranto lalao any Ampasambazaha ka hifanandrina amin’ny 3FB avy any Toliara ny Uscafoot, ny alahady ho avy izao. Efa any an-toerana, herinandro mialoha, ny ekipan’ny kaominina Antananarivo Renivo­hitra amin’izao fotoana izao.Synèse R.L’article Kitra – « Orange Pro League »: hiady ny ho lohany ny AS Adema sy ny Ajesaia a été récupéré chez Newsmada.
Fanohanana sy fiaraha-miasa: mitaky fitsarana mahaleo tena sy itokisana ny Amerikanina
Nampahafantarina, omaly, ny tetikasa maharitra dimy taona vatsin’ny Amerikanina vola hanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka. Nambaran’ny ambasadaoro amerikanina, i Michael P Pelletier, sy ny filoha voalohan’ny fitsarana tampony, Rajaona Andriamanankiandrianina, izany tetikasa 4 tapitrisa dolara izany. Hanamafisana ny fahafaha-mahefan’ny fitsarana momba ny kaonty sy hanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka izany. Mazava ny nambaran’ny ambasadaoro Pelletier fa singa iray manan-danja ahafantarana firenena demokratika tsara tantana ny fisian’ny fitsarana mahaleo tena sy azo itokisana. “Mahafaly anay ny manohana azy, manamafy ny fahaiza-manaon’ny mpiasa ao aminy. Manatsara ny kalitaon’ny fanaraha-maso ataony, ary manitatra ny andraikitra sahaniny”, hoy izy. Hanatsara ny fitantanana anatiny, hanamafy ny serasera sy ny fifandraisany amin’ny vahoaka, ary hanatsara ny kalitao sy ny fiantraikan’ny fanaraha-maso ataon’ny fitsarana izany. Nanambara ny filoha’ny fitsarana momba ny kaonty Rakotondramihamina Jean de Dieu fa mendrika hanana fitsarana momba ny kaonty mahaleo tena, hita miasa sy mendri-pitokisana ny vahoaka. “Manamafy ny Andrimpanjakana eto amintsika isika izao hahafahan’ny firenena matoky ny fitantanana ny volam-bahoaka”, hoy izy.Synèse R.L’article Fanohanana sy fiaraha-miasa: mitaky fitsarana mahaleo tena sy itokisana ny Amerikanina a été récupéré chez Newsmada.
Jirama : efa tonga ny faktiora jolay ho an’Analamanga
Mitohy ny fampiharan’ny Jirama ny antsoina hoe «facturation par lots». Izany hoe, naroso ny fandoavana ny faktiora ka aloa avy hatrany ny fandaniana jiro sy rano, ny volana itsahana fa tsy miandry iray volana, toy ny hatramin’izay. Nampiharin’ny Jirama izany fepetra vaovao izany, nanomboka ny faktiora volana marsa. Amin’izao fotoana izao, efa tonga any amin’ny mpanjifa ny faktiora volana jolay. Indroa nandalo isan-tokantrano ny mpiasan’ny Jirama ka nalaina ny tarehimarika ny fiandohan’ny volana jolay, ary niverina indray izy ireo ny tapaky ny volana ihany, ka aloa amin’izao fiandohan’ny volana aogositra izao. Raha atao ny salanisa, herinandro teo ho eo ny nikajian’ny Jirama ny sora-bola aloan’ny mpanjifa fa tsy niandry iray volana toy ny tany aloha. Raha ny hita, omaly, lava dia lava ny filaharan’ny mpandoa faktiora teny amin’ny masoivoho Jirama Analama­hitsy, ary tafavoaka hatrany amin’ny arabe mihitsy aza.Njaka A.L’article Jirama : efa tonga ny faktiora jolay ho an’Analamanga a été récupéré chez Newsmada.
Fenoarivo Atsinanana: ravan’ny zandary ny tambajotran-jiolahy tarihin’i Jean Marcel
Naiditra am-ponja ao Fenoarivo Atsinanana, ny talata teo ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny fanafihana tao an-toerana. Trano maro no lasibatr’ity andian-jiolahy ity tamina fokontany samy hafa ao Fenoarivo Atsinanana.Manoloana ny tsy fandriampahalemana any an-toerana, niezaka ny zandary nametraka ny paikady rehetra ahafahana misambotra ireo jiolahy mpamaky trano. Ny zoma 9 jolay 2021, tokantrano iray ao amin’ny fokontany Ambataria Fenoarivo Atsinanana no voaroban’ny jiolahy ka lasa tamin’izany ny entam-barotra maro. Nametraka fitoriana teny amin’ny zandary ireo lasibatra ka nitohy ny fikarohana ireo jiolahy. Voalazan’ny kaomandin’ny kaompanian’ny zandary, ny Kapiteny Serge Eltypica Princy Antonio fa nisy iray tamin’ireo jiolahy (i Jean Marcel io) ireo no efa ahiahiana satria fantatr’ireo niharan’ny fanafihana ny momba azy. Tonga tao an-tranony ny zandary nanao ny fisavana. Vokany, hita tao an-tranony ny ampahan’ireo entana very miaraka amina entana hafa.Nalevin-dry zalahy ny sasany tamin’ireo entana halatra…Niaiky ny heloka vitany i Jean Marcel, nandritra ny fanadihadiana nataon’ny zandary ka nanoro ireo namany mpiara-manao asa ratsiny aminy. Nohamafisin’ity manamboninahitra ity fa maro ny vaky trano efa nataon’ireto jiolahy ireto tao Fenoarivo Atsinanana. Noraisim-potsiny tao amin’ny fokontany Ampasipotaka ireo jiolahy naman’i Jean Marcel, niaraka tamin’ireo entana halatra maro hafa. Nitohy ny fanadihadiana nataon’ny zandary ka nanoro ny toerana nanafenany ny entana halatra. Nandritra izany no nahitan’ny zandary fa efa nalevina avokoa ny entana sasany tsy tafiditra tao an-trano. Jiolahy efatra indray tratra, izay iray tarika amin’i Jean Marcel.Sajo/J.CL’article Fenoarivo Atsinanana: ravan’ny zandary ny tambajotran-jiolahy tarihin’i Jean Marcel a été récupéré chez Newsmada.